Ku dar midabyo firfircoon oo casri ah labiskaaga | Bezzia
Maria vazquez | 09/05/2022 10:00 | Isbeddellada
Haddii uu jiro isbeddel u muuqda inuu cad yahay xilli ciyaareedkan, waa ballanqaadka midabyo firfircoon sida cagaar, oranji, casaan ama jaalle. Midabada soo jiidashada leh ee aan ku dari karno habayntayada siyaabo aad u kala duwan taas oo ku xidhan haddii aan badan nahay ama ka yaraynno.
Waxaad hubtaa in qaar badan oo idinka mid ah ay u maleynayaan in midabadani aysan adiga ahayn. Si kastaba ha ahaatee, laga yaabee ka dib markaad aragto xulashadayada sawirada waxaad bedeli doontaa maskaxdaada. la macaamilka midabada isbeddelka Dhammaantood waxay leeyihiin door weyn oo ku saabsan ururinta cusub, sidaas darteed awood u leh inay doortaan noocyo kala duwan oo dhar ah, qalabyo iyo qalab si ay ugu daraan dharkayaga.
2 Sida loogu daro iyaga labbiskayaga
cagaar iyo liin Waxay yihiin midabada sida muuqata siin doona ciyaarta ugu badan xagaagan, oo ay si dhow ula socdaan pinks. Midka hore waxaa lagu dari doonaa caddaan ama waxaa loo isticmaali doonaa in lagu abuuro dhar hal midab ah. Pink, dhanka kale, waxaa laga heli doonaa soo jeedinno badan oo lagu daray orange, siinaya qaabka qaar ka mid ah dharka ugu firfircoon ee xilli ciyaareedka.
Sida loogu daro iyaga labbiskayaga
Ma u janjeertaa inaad diido midabada geesinimada leh ee kuwan oo kale ah? Ka dib isku day inaad ku darto dharkaaga iyada oo loo marayo plugins. Kabaha cidhibta sare leh ama boorsada ayaa ku siin kara qoraalkaas midabka iyo isbeddelka aad ku raadinayso go'aan gaar ah.
Un dalagga sare ee midabyo dhalaalaya Waxay ku dari doontaa isbarbardhigga qaab dhexdhexaad ah. Isku dar surwaalka dhexda dheer iyo shaadhka cad ee korka ah waxaadna ku guuleysan doontaa muuqaal aad u qurux badan. Sow ma tihid dalagga sare? Waxaad ku gaari kartaa saameyn isku mid ah surwaal ama shaati midab firfircoon oo ka duwan mid cad ama madow.
Midabku kuma cabsiiyo? Dharka monochrome ah midabadani waa isbeddel, gaar ahaan kuwa ka kooban goono iyo jaakad gaaban. Sidoo kale suudhku waa beddel wanaagsan. Markaad ku daasho, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dharkeeda si gooni ah.
Sawirro - @bartabacmode, @tianykirilove, @mariadelaord, @walkinwonderland, stylist, moodada, @abdihakin_abdi
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Isbeddellada » Ku dar midabyo firfircoon oo casri ah labiskaaga